ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်
ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်
Posted by mgmaung on Jan 15, 2012 in Copy/Paste | 50 comments
ယခုသမ္မတကြီးရဲ့ သဘောဆန္ဒဖြင့်လွှတ်ပေးခံရသူတွေက နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေလို့ နားလည်မိတယ်/
သူတို့ယုံကြည်မှုဟာ တစ်ပါးသူတွေ မထိခိုက်အောင် အစိုးရက ညှိနှိုင်းပေးဖို့လိုတာပါ/
အဲဒါကို ကိုယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ မတူလို့ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတာတွေကတော့ မဖြစ်သင့်တော့ဘူးပေါ့/
နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေ လွှတ်ပေးတယ်ဆိုရင် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေကော မလွှတ်သင့်ဘူးလာ?
အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားအပေါ် မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ယုံကြည်မှုမတူညီလို့ထေရ၀ါဒကို ထိခိုက်တယ်ဆိုကာ ထေရ၀ါဒသံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ (မဟန)ရဲ့ ဖမ်းဆီးစေခိုင်းမှုကြောင့် မြစ်ကြီးနားထောင်တွင် သက်တော် ၇၃-နှစ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်သော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် ရှင်ဉာဏ (ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ) ထေရ၀ါဒအခေါ် မိုးပြာဆရာတော်သည်လည်း ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသည်ဟု ကြားသိရပါသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးခင်ဗျာ/
ထိုကဲ့သို့ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက် မတူမှုကို အကြောင်းပြု၍ မဟနမှ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေထက် ထောင်တွင်း အကျဉ်းချခိုင်းစေခြင်းတို့လုပ်ဆောင်မှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါ/
သို့အတွက်ကြောင့် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်မတူညီသော အယူဝါဒများ၏ ဖိနှိပ်ခြင်းခံနေရတဲ့အပေါ်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးခြင်းဖြင့် ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ အကျိုးကိုလည်း ထပ်မံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုလျှင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကော၊ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ပါ အကျိုးများမည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်/
ယခုကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဓမ္မအပေါ် ယုံကြည်သဘောပေါက်မှုမတူညီမှုညီမှုများအပေါ် မဟနမှ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချစေခိုင်းမှုကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်များသည် ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကလည်းမရှိခဲ့သလို အစဉ်အဆက်လည်းမကြားမိခဲ့ပါ/
အယူဝါဒကွဲလွဲမှုအပေါ် အယူဝါဒများဟောပြော၊ ယှဉ်ပြိုင်၊ ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ဖြင့်သာ သမိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်/
တရားဓမ္မကို တရားဓမ္မများဖြင့်သာ ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်/
ယခုကဲ့သို့ မဟနမှ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်အား ထောင်သွင်းအကျဉ်းကျခံစေမှုတို့သည် တရားသမားတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်မျိုး ဟုတ်ရဲ့လားဟု စဉ်စားတတ်သူတို့အတွက် စဉ်းစားစရာပါ/
မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့ (မဟန)သည် အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဘာသာရေးအဖွဲ့ ဖြစ်နေပြီလား?
ယနေ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဆောင်နေသော အစိုးရအဖွဲ့သစ်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်နဲ့ကော ကိုက်ညီရဲ့လားဟု ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုပေပြီ/
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ကျင့်သုံးနေကြဦးမယ်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတော်နဲ့ ဘာသာနဲ့ က လမ်းစဉ်းမတုနိုင်တော့ပါ။ လမ်းစဉ်မတူရင် ဘာသာလည်း မထွန်းကားနိုင်တော့ပါကြောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးလိုလားပြီး တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
“ မတူတာတွေဘေးဖယ်၊ တူတာတွေနဲ့ သဘောထားကြီးကြီး ညှိနှိုင်း လက်တွဲပြီး ဆောင်ရွက်ကြမှသာလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်/”
ယခင် သတင်းမှတ်တမ်း www.youtube.com
View all posts by mgmaung →
ကိုဇာဂနာ.. ခဏခဏပြောတဲ့.. မြစ်ကြီးနားထောင်ထဲက.. ဆရာတော် ဦးဉာဏဆိုတာ.. ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်လားလို့ သိချင်ပါတယ်..။
ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်.. အကျဉ်းကျခံရတဲ့အတွက်လည်း.. အလွန်စိတ်မကောင်ပါဘူး..။ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အေ၇းပြဌာန်းချက်နဲ့လည်း မညီပါဘူး…။
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့…. သမ္မတကြီးကို တိုက်တွန်းပါကြောင်း….။
ကိုဇာဂနာ.. ခဏခဏပြောတဲ့.. မြစ်ကြီးနားထောင်ထဲက.. ဆရာတော် ဦးဉာဏဆိုတာ.. ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် ရှင်ဉာဏပဲဖြစ်ပါတယ် kai/
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့…. သမ္မတကြီးကို တိုက်တွန်းပါပေးတဲ့အတွက်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသူတိုင်း ၀မ်းသာကြမှာပါ/
http://www.4shared.com/video/_dbflfyd/skyblue-a.html?cau2=403tNull မိုးပြာဆိုသည်မှာ ဆိုတဲ့ Movies files မှာ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သြ၀ါဒ၊ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သြ၀ါဒတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလာသူတို့ လိုက်နာစရာပါ/
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အညတရ သူရဲကောင်းဆု ပေးလိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီး ဦးဉာဏ ဆိုတဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ရဲ့ တရားတွေဟာ ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ အရိယသစ္စာ တနည်း လူတွေရဲ့ ကံအမှုတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ လုပ်တတ်၊ ပြောတတ်၊ နေတတ်အောင် လမ်းညွှန်ထားတာမို့ တကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေပါပဲ/
နိုင်ငံတော်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာ ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ကံအမှုတွေ ငြိမ်းချမ်းစေတဲ့ အရိယသစ္စာတရားကို ကျင့်သုံးမှသာလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာပါ/
အာဏာရှင်တွေလက်ထက်မှာတော့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်နဲ့တကွ ဒေါ်စုအပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်ဆောင်တွေ အကျဉ်းကျခံခဲ့ရပါတယ်/
ယခု ဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဒေါ်စုအပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်ဆောင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရိဆရာတော်ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အရိယသစ္စာတရားလမ်းစဉ်အတိုင်း အကောင်းအထည်ဖော်ကြမည်ဆိုလျှင် တကယ့်စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရောက်ရမည်ဟု ယုံကြည်မိပါတယ်/
ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီငြိမ်းချမ်းရေးကို နိုင်ငံတော်မှ အရောက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာ အရိယသစ္စာကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့သော လူ့ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်၊ ဒေါ်စုအပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်ဆောင်များနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်အဖွဲ့တို့အတူလက်တွဲ အကောင်းအထည်ဖော်ကြမည်ဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓအလိုကျ တကယ့်စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးသို့ ရောက်ရမည်မှာမလွဲနိုင်ပါ/
မြစ်ကြီးနားထောင်တွင် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်နဲ့ အတူနေခဲ့ရသော ဆရာတော် ၀ီရသူမှ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် ရှင်ဥာဏနဲ့ ထေရ၀ါဒမှ သံဃာတချို့ကိုလည်း လွှတ်ပေးသင့်ကြောင်း RFA သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည်ဟု ကြားသိရပါတယ်/
မိုးပြာဆရာတော် ရှင်ဥာဏကို အကျဉ်းချထာလေလေ မဟနအဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းလေလေ။
ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး၊ တစ်ယောက်ကို ထောင်ကျစေတာသည် သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်မဟုတ်ပါ။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်)က ရဟန်းအာဏာပိုင်တွေလို့ ပြောခဲ့တာ။
ရွှေည၀ါဆရာတော်ကလည်း မဟနမှ ဒီကဲ့သို့ (အာဏာရှင်ဆန်ဆန်)ကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ကြောင်း သတင်းဌာနတွေကို ပြောခဲ့ပါသည်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပြည်သူလူထုက အာဏာရှင်တွေကို မုန်းတီးနေသောကြာင့် ဖြစ်သည်။
အာဏာရှင် ဘာသာရေး မဟနအဖွဲ့ကို လူတွေကမုန်းလာကြရင် အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ မိုးပြာဆရာတော်ကို လူတွေအလိုအလျှောက် (ဂရုဏာနဲ့) စိတ်ဝင်စားသွားမှာပါ။
မဟန က လူကြမ်းမင်းသားတွေဆိုရင် သူတို့ အနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ မိုးပြာဆရာတော်က ဇာတ်လိုက်မင်းသားအလိုလို ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့။ မဟနတွေ စဉ်စား၊ ပြုပြင်ဖို့ အချိန်တန်နေပြီ။
ကျုပ်စိတ်ထဲ.. ဘ၀င်မကျတာ တခုရှိတယ်..။
ဘုန်းကြီးဦးဥာဏက.. သူ့ကိုယ်သူ.. အရိယာပါလို့ နိုင်ငံသိကြေငြာတာကို.. ဟုတ်မဟုတ်.. စစ်ဆေးနိုင်တဲ့..နည်းပေါင်းများစွာရှိပြီး.. စစ်ဆေးခွင့်တောင်းဆိုသင့်ပါလျှက်.. အဲဒီလိုစိန်ခေါ်လုပ်သင့်တာမျိုး.. မတောင်းဆိုပဲ.. သူ့တရားတွေကို.. နှိပ်ကွပ်ဖို့ လိုချင်တာလေး..ဖြတ်တောက်ပြီး.. တိုက်ခိုက်ကြသူတွေကိုပါ..
ရှေးကျမ်းတွေမှာ.. ရဟန္တာဖြစ်တယ်ထင်တဲ့ ဘုန်းကြီးကို.. မိချောင်းဟန်ဆောင်ဆွဲပြီး..ရုတ်တရက်ထိတ်လန့်ကြောက်သွားတာ.. ရှိမရှိ.. စစ်တာမျိုးတောင် ဖတ်ဖူးတယ်..။
ရဟန္တာက. နှဘုံးသွင်းမှန်တာမို့…ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေ.. မရှိတော့ဘူး ဆိုတယ်လေ…။
အခုလည်း.. မယုံကြရင်. စစ်ပေါ့…။ ခွင့်ပြုချက်ရရင်.. ကျောကို.. ၀ါးခြမ်းပြားလောက်နဲ့.. ခိုးဖြတ်ရိုက်ပြီး စစ်လည်းရတာပဲ..။
( ဥပမာပြောတာပါ…။ ဟုတ်နေရင်တော့.. ဆောရီး..။ တောင်းပန်လိုက်ပေါ့ ..)
အခုဟာက.. မဟနထဲက.. တပါးမှ.. အရိယာလို့ဝန်ခံထားတာမရှိပဲ.. (တချို့ဆို.. အရိယာမဟုတ်ပါဘူးတောင် ပြောထားကြတာ) သူတို့က.. အရိယာတရားဝင်ကြေညာရဲသူကို.. အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်း.. ဖမ်းထောင်ချတာကြီးက.. တမျိုးကြီးပဲ..။
အခုထောင်ချထားတဲ့… လုပ်ရပ်က.. လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်နေတာ.. သေချာလှသမို့.. ကျုပ်က.. လူသန်း၇ထောင်အသိအမှတ်ပြုလက်ခံတဲ့.. ကုလသမဂ္ဂကြေညာစာတမ်းဖက်က ရပ်မယ်..။
တရားတာကိုချစ်ရင်.. … တရားတဲ့ဖက်က ရပ်တည်ပေးကြ…။
သဂျီး က သဂျီး ပါဘဲ
မသိသေးသော ရှေးကျမ်းပါ အဆိုများကို လေ့လာခွင့်ရသွားပါသည် ။
တခါက ဒီဃဘာဏက အဘယဆိုသော မထေရ်ကြီးတပါးသည် ပိဏ္ဍပါတ်ဓုတင်ဆောင် ရဟန်းတပါးကို ပုထုဇဉ်လော ရဟန္တာလောဟု မခွဲခြားမဆုံးဖြတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍ သူငယ်တယောက်အား အမှတ်သညာပေးထား၏။ ထိုသူငယ်သည် ကလျာဏီမြစ်ဆိပ်၌ ငုပ်၍ ရေချိုးနေသော ထိုရဟန်း၏ ခြေထောက်ကို ဆွဲလေ၏။ ပိဏ္ဍပတ်ဓုတင်ဆောင် ရဟန်းသည် မိကျောင်းမှတ်ပြီး ကျယ်လောင်စွာ အော်ဟစ်လေရာ ပုထုဇဉ်မှန်းသိရလေ၏။ မှန်ပါသည်။ ရဟန္တာမည်သည် ဦးထိပ်၌ မိုးကြိုးကျသော်လည်း ကြောက်တုန်လှုပ်ခြင်း မဖြစ်တော့ပါ။ အသက်ခန္ဓာ၌ တပ်မက်ခြင်း နိကန္တိကို ပယ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
( မ-ဋ္ဌ ၄-၆၆။ သာရတ္ထ-ဋီ ၂-၂၈၅ )
မတူသော အတွေးနဲ့ မြင်ကြည့်မယ်ဗျာ။ ကြောက်လန့်တကြားအော်လို့ ရဟန္တာ မဟုတ်တာ လက်ခံပါတယ်။ အနာဂါမ်အဆင့်အထိ မရောက်သေးတာလည်း လက်ခံတယ်။ သို့ပေမဲ့ အောက်နှစ်ဆင့် အရိယာဖြစ်နေရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဘဇာကြောင့် ပုထုဇဉ်လုံးလုံးလျားလျား ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်သလဲ။ အနာဂါမ်ဆိုရင် ဒေါသကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်လို့ ကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူး၊ ရဟန္တာကတော့ ကိလေသာအားလုံး ပယ်သတ်ပြီးသွားလို့ ပြောစရာမရှိဘူး။
အောက်နှစ်ဆင့်မှာ ပုထုဇဉ်များနဲ့ နင်လားငါလား ငိုစရာရှိငို လွမ်းစရာရှိလွမ်း ရယ်စရာရှိ ချစ်စရာရှိ ချစ်နိုင်ကြသေးတယ်။ (သဘောကို မြင်ကြည့်ပါ၊ ပုထုဇဉ်များလိုတော့ တရားလက်လွတ် မပြီးနိုင်စီးနိုင် ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲနော်)
ထေရ၀ါဒရဲ့ ပရမတ္တသစ္စာက ပုံဖော်ထားတဲ့ ရဟန္တာနဲ့ အရိယသစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်အရ ဆိုလိုတဲ့ ရဟန္တာ အခြေခံတရား သစ္စာမတူတာမို့ တူနိုင်ပါ့မလား။
ယနေ့ မြန်မာထေရ၀ါဒသည် ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏ ပရမတ္တသစ္စာအယူကို အဓိကထားတဲ့ သီဟိုဠ်ခေတ်က စာရေးဆရာဘုန်းကြီးတွေ စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးခဲ့တဲ့ ကျမ်းတွေကို အဓိကထားဖွင့်ဆိုခြင်းကြောင့် ဂျိန်းဘုန်းကြီးဆန်ဆန်ဖြစ်နေတာကို ရဟန္တာလို့ ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးဦးဥာဏက.. သူ့ကိုယ်သူ.. အရိယာပါလို့ နိုင်ငံသိကြေငြာတာခဲ့တာကို ထေရ၀ါဒီ သီဟိုဠ်နောက်လိုက် ပရမတ္တသစ္စာသမားတွေ ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ အရိယာဆိုတာကြီးနဲ့ စစ်ဆေးရင်တော့ လွဲပြီပေါ့။
စစ်ဆေးမည့်သူတွေကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိယသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးမှ စစ်လို့ရမှာပါ။
ပရမတ္တသစ္စာအသိတွေနဲ့ စစ်ဆေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ ယနေ့ အိန္ဒိယမှာ ကိုယ်လုံးတီးနေကြတဲ့
ဂျိန်းဘုန်းကြီးတွေဟာ ရဟန္တာလို့ သတ်မှတ်လိုက်ရမလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
တရားသိသူမှ တရားရှိသူကို မြင်နိုင်မှာပါ။
ဒါေ့ကြာင့် ကိုယ်တိုင်အရိယသစ္စာ တရားသိသူများဖြစ်ကြအောင် Online ရှိ အရိယသစ္စာလေ့လာလိုသူများအတွက် လိပ်စာတစ်ခု ညွှန်လိုက်ပါတယ်။ http://www.ariyathitsa.org တွင် ပရမတ္တသစ္စာမဟုတ်သော ဗုဒ္ဓ၏ စစ်မှန်သည့် အရိယသစ္စာကို လေ့လာနိုင်ကြပါစေ။
(အခုဟာက.. မဟနထဲက.. တပါးမှ.. အရိယာလို့ဝန်ခံထားတာမရှိပဲ.. (တချို့ဆို.. အရိယာမဟုတ်ပါဘူးတောင် ပြောထားကြတာ) သူတို့က.. အရိယာတရားဝင်ကြေညာရဲသူကို.. အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်း.. ဖမ်းထောင်ချတာကြီးက.. တမျိုးကြီးပဲ..။ ) ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သီဟနာထ စာတမ်း http://dc309.4shared.com/download/NtywVFrS/Sihanahta.pdf?tsid=20111229-111556-409421ef လေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
မဟန လုပ်ရပ်မမှန်မှုတွေကတော့ များစွာတွေ့ရပါတယ်။ မဟန ဦးဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့ ၀ိနိစ္ဆယ ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်လည်း စောဒက(တရားလို)၊ စုဒိတက(တရားပြိုင်)၊ ၀ိနည်းဓိုရ်(တရားသူကြီး) နှင့် မဟန(၄၇)မှ သံဃာများ စုံလင်စွာပါဝင်ပြီး တရားလိုတင်ပြသည်ကို တရားပြိုင်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြ၊ ၀ိနည်းဓိုရ်မှ ပြန်လည်မေးမြန်းပြောဆို ဆုံးမရမှာပါ။ ဒီနေရာမှာလည်း စုဒိတကအမြင်နှင့် စောဒက အမြင် မတူလျှင် ညှိနှိုင်းမရပါဘူး။
ပြောလိုသည်မှာ မူလတန်းကလေးသည် အလယ်တန်းအဆင့်ကလေး၏ အမြင်များကို အမှားဟုစွပ်စွဲပြီး မူလတန်းအဆင့်သာရှိသော တရားသူကြီးမှ ဆုံးဖြတ်၍မရပါ။ ဒါအနိမ့်ဆုံးဥပမာပါ။
ယခုတွင် သည့်ထက်ပို၍ပင် ဆိုးပါသည်။ စောဒကနှင့် ၀ိနည်းဓိုရ် နှစ်ဖွဲ့သာပါပြီး စုဒိတက မပါဘဲ စုဒိတကဟု နာမည်သွင်းပြီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ အဆုံးအမများကို အဓမ္မဟု တစ်ဘက်သတ်ကြေညာ ထုတ်ပြန်သည့် အဆင့်ထိ အာဏာကြီးဆိုးနေကြပါသည်။ စောဒကနှင့် ၀ိနည်းဓိုရ်ပေါင်းပြီး ပြုလုပ်သည်ကို မဟန(၄၇)ပါး အဖွဲ့ဝင် သံဃာအချို့မှလည်း ထောက်ခံပြီး ကြွရောက်ပြီး မျက်စိမှိတ်နားထောင်ကြသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။
အဆိုးဆုံးမှာ အဓမ္မအဖြစ်ချမှတ်ကြေညာသော စာအုပ်မှာ အဓမ္မဟု ၀ိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များမှ မဆုံးဖြတ်မီအချိန်မှပင် စောဒကဆရာတော်များမှ ထုတ်နုတ်ပုံနှိပ်လာပြီး ၀ိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များထံ ဆက်ကပ်ပြီး ဤစာအုပ်ထဲမှ ဆရာတော်တို့ ကြိုက်တဲ့အပိုင်းကို ဖတ်ပြီး အဓမ္မအဖြစ် သတ်မှတ်သည်ဟု မြွက်ကြားပေးပါဘုရားလို့ ခိုင်းစေလျှောက်ထားသည်မှာ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၏ ၀ိနိစ္ဆယ ဆုံးဖြတ်ချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ သံဃာထုအပေါင်း သိရှိနိုင်ကြပါစေရန်။
– မဟုတ်ဘူး ကောလာဟာလ တွေပါ။ အသုတ်ရော၊ ရေကြည်ရော၊ ငါးသိုင်းချောင်းတွေရော
ကောလာဟလတွေပါ။ မျက်မြင်ကိုပဲ လက်ခံတယ်။ ဘယ်လိုပြောပြော လက်မခံဘူး။
ရှင်းလင်းပါပေတယ် ကိုဇာဂနာရယ်။အင်း….ကြားရတာတော့ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာပါနော်။ဒါပေမယ့်
ရဟန်းသံဃာတွေအပေါ်မှာ ဖိနှိပ်နေတာကတော့ တော်တော်လေး အံ့သြစရာပါဗျာ။မြန်မာပြည်
ဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမကို နာခံတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့ ခုလိုနိုင်ငံ မှာ (၄၇)ပါးရဲ့အလိုကျ
လား၊အာဏာရှင်အလိုကျလား မသိရအောင် ခွဲခြားရခက်နေတဲ့နေရပ်ဖြစ်နေပီ။
ဒီ အာဏာရှင် (၄၇)ပါးရဲ့အလိုကျက အာဏာရှင်အစိုးရလက်ထက်တွေမှာပဲ ရမှာပဲ။
ဒီမိုကရေစီအစိုးရနဲ့က လားလားမှမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို ရိပ်မိဖို့လိုပြီနော်။
ခင်ဗျားတို့ ဘုန်းကြီးတွေ ကိစ္စ ဘုန်းကြီးတွေကို သွားပြောကြ
ကျုပ် အခု ဖင်ကုတ်မအားအောင်အလုပ်ရှုပ်နေတယ်
ဆန်စက်ဖွင့်မှ ဖွဲနုလေးဘာလေးရမှာ ဆိုတော့
အမေဒိဂန်တွေက ဆန်စက်ဖွင့်ဘို့ ဘုန်းကြီးတွေကို သိပ်ဦးစားမပေးထားဘူး
ဘုန်းကြီးတွေ ကိစ္စကို ဒီမဟနဘုန်ကြီးတွေက ယခင်လူအာဏာရှင်အစိုးရကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အသုံးချခဲ့လို့ ပြောနေရခြင်းဖြစ်၏။
ဒီအတိုင်းသာ မဟနဘုန်းကြီးတွေ တရားနည်းလမ်းတကျ သူတို့ မနိုင်တိုင်း အစိုးရတွေကို ခုတုံးလုပ်နေဦးမယ်ဆိုရင် ကြာရင် အစိုးရတွေက စိတ်ပျက်လာမှာပဲ။ အခုဒီမိုကရေစီအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ မဟနဘုန်ကြီးတွေ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် မကျင့်သုံးသင့်တော့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်ကျော်က ဆရာတော်ဦးဥာဏတစ်ပါးတည်း စွမ်းဆောင်နေခဲ့ရတဲ့ အရိယသစ္စာတရားကို မဟနတွေ နိုင်းနင်းအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ အခု ဆရာတော်ဦးဥာဏကျေးဇူးကြောင့် ဗုဒ္ဓ၏အရိယသစ္စာတရာတော်ကို မြန်မာနိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကပါ လေ့လာပြီးကျင့်သုံးနေကြတဲ့အခြေအနေထိရောက်နေတာကို မဟနတွေ ဇွတ်နှိပ်ကွက်နေတာတွေမလုပ်သင့်တော့ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်သန္ဓေတည်ကစမှာနိုင်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ အကောင်အထည်ရင့်လာမှာ အတင်းဇွတ်ဖျက်ချဖို့ ကြိုးစားရင်တော့ အဲဒါ လူသတ်မှုပဲ။
အခုလို ကမ္ဘာသိအောင်လူတွေလက်ခံလာကြတဲ့ အခြေအနေရောက်မှ မဟနတွေက အတင်းဇွတ်နှိပ်ကွက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို ဖျက်ဆီးမှုပဲ၊ ဒါ လူသတ်မှု ဥပမာလိုပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် လက်နတ်ကိုင်သူပုန်တွေနဲ့တောင်မှ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေတောင်လုပ်လို့ ရမှတော့ ငြိမ်းချမ်းစေတဲ့ ဘာသာရေးမှာ မဟနတွေက စေ့စပ်ညှိနှိုင်းတာတွေကို မလုပ်ပဲ အတင်းဇွတ်နှိပ်ကွက်နေခြင်းဟာ မငြိမ်းချမ်းစေတဲ့ အဓမ္မလမ်းစဉ်ပါ။
တပည့်တော်တို့လို လူဝတ်ကြောင်တွေက ဘာလုပ်လို့ရနိုင်မှာလဲနော
စာထဲမလဲ အတိကျပါတာဘဲ မဟုတ်လား
အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးဖြစ်တယ် ဘာညာ
နောင်ဘဝ သူနဲ့ သံသရာမလည်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဘုရား
မှတ်ချက်။ ။ များစွာလျှောက်တင်ခြင်ပါသေးသည်
နောင်ဘဝ သူနဲ့ သံသရာမလည်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဘုရား) အဲဒီ သေပြီးနောက်အယူဝါဒဟာ အာဏာရှင်တွေအကြိုက် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူကွဲ့။ ဒါမှ လူတွေကို သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်ရင် အဲဒါ မင်းတို့ အရင်ဘ၀က လုပ်ခဲ့လို့ ခံရတာလို့ အာဏာရှင်အလိုကျ ဘာသာရေးသမားတွေက ဟောပေးရတာပေါ့။ လုံးဝဘုရားဟောမဟုတ်ပါလို့ ချီးပေရေ နာလည်ပေးကွဲ့၊ သိချင်ရင် http://sites.google.com/site/sayamvasi/ssarsanarandMyanmar.pdf သာသနာနှင့် ယနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာ စာအုပ်လေး download ဆွဲပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
ပစ္စည်းသင်္ခါရ လူသင်္ခါရပေါ့ဗျာ
ကြောက်ချာဂျီးပါလား မောင်ကြက်ဂီချိစ်ပေရဲ့…။ အယူတိမ်း နတ်စိမ်းဖြစ်ဆိုတာ အဲဒါမျိုးထင်ပါ့။ မသေခင်က သဂျီးကို ထမီလှန်ပြရဲမှတော့ သရဲဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်သူကိုမှ မကြောက်တော့ဘူးပေါ့။ ရွာထဲမှာလည်း အဲသလို ပေါက်ပေါက် မြောက်မြောက် စိတ်ထင်ရာ ပြောနေတဲ့ အရိယာသစ္စာရှင်ဆိုသူများ ရှိနေလေရဲ့။ သူတို့သေလို့ သရဲအရိယာပါဆိုပြီး လိုက်ခြောက်နေရင် ဒုက္ခောပဲ…။
Sai Mya Too Gyar says:
သံဃာတော်တွေဟာ သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပါ။ မဟနမှာ ထေရ်ကြီး ဝါကြီးတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်ကို ဂုဏ်သိက်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်နားစွန်နားဖျားကြားပြီး အကြောင်းရင်းမသိပဲနဲ့ မပြောကြပါနဲ့။ မဝေဖန်ကြပါနဲ့။ ငရဲကြီးကြမှာ စိုးလို့ တားပါတယ်။ ကျမ်းဂန်မှာ တတ်သိကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို အနည်းငယ်လောက်သိတာကို ဘာဘာညာညာနဲ့ ပြောပြီး ပြစ်မှားရင် ပေတကထာမှာ ပါမှာ စိုးလို့ တားပါတယ်။ နားလည်ကြပါ။
ဒီပိုစ့်ကို ၀င်မပြောထိုက်ဘူးထင်လို့ ထားတာ….
ဒါပေမယ့် ကြာလေဆိုးလေ ဖြစ်လာတယ်။
အကြောင်းမည်မည်ရရမရှိပဲနဲ့ မဟန ကိုမုန်းတီးအောင် တမင်လှုံ့ဆော်တာတွေ များလာလို့-
အပေါ်က ကိုပါကြီး ဆိုသူပြောမှ သဘောပေါက်သွားတယ်။
“အာဏာရှင် ဘာသာရေး မဟနအဖွဲ့ကို လူတွေကမုန်းလာကြရင် အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ မိုးပြာဆရာတော်ကို လူတွေအလိုအလျှောက် (ဂရုဏာနဲ့) စိတ်ဝင်စားသွားမှာပါ။”
သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က ဒီလိုကိုး။ မိုးပြာခေါင်းဆောင် ဦးဥာဏ ကိုစိတ်ဝင်စားစေချင်လို့
မိုးပြာဝါဒကို စိတ်ဝင်စား စေချင်လို့
မဟန နဲ့ ပြည်သူကို ရန်တိုက်နေတာကိုး..။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သတိပြုကြရန် အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုကြပါ။
“သူတို့က.. အရိယာတရားဝင်ကြေညာရဲသူကို.. အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်း.. ဖမ်းထောင်ချတာကြီးက.. တမျိုးကြီးပဲ..။”
သူကြီးပြောတာဖတ်ရတော့ စိတ်ထဲ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်မိတယ်။ မိုးပြာခေါင်းဆောင် ဦးဥာဏ ဘာကြောင့် မဆလ လက်ထက်မှာ အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာ သူကြီးတကယ်ပဲသိပုံမပေါ်ဘူး။
မန္တလေးမှာ ဘာဖြစ်တယ် … ရန်ကုန်မှာဘာဖြစ်တယ်…ဆိုပြီး ကျုပ်ကပြောရင် အချက်အလက်ခိုင်မာမှု့နည်းမှာမို့ ကောလဟလ တွေ ပြောသလိုဖြစ်မှာပဲ။
အဲဒါ. သိတဲ့ လူတွေ ဘုန်းကြီးတွေက ဘာမှဝင်မပြောဘဲ ဒီလိုပဲကြည့်နေကြသလား။
သူကြီးမင်းကို အကြံပြုချင်တာက ၀ီကီကိုမွှေသလိုမျိုး မိုးပြာသမိုင်းကို မွှေကြည့်ပါဦး။ ပြီးမှဖြေးဖြေးပြောတာပေါ့။
ပြီးတော့ မဟန ဆိုတဲ့ သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး
ဘယ်သူတွေက organize စလုပ်ခဲ့တာ
ဘာတွေ လုပ်နိုင်ပြီး ဘာတွေ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ
“နေ၀င်းကလုပ်ခိုင်းလို့ စိန်လွင်က လုပ်ထားတဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့” ဆိုတာ နောက်လူတွေ တကယ်ထင်ကုန်ရော။
မဟန လုပ်တာတိုင်း အကောင်းကြီးမဖြစ်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုတလော ၀ိုင်းပြောသလို လူဆိုးလူမိုက်ဂိုဏ်းကြီးလိုသာဆိုရင်
အဲဒီအဖွဲ့ထဲ ၀င်ပြီး ၀န်ဆောင်နေတဲ့ အထင်ကရ ဆရာတော်ကြီးများက ဘာလဲ????
သူများဆဲတိုင်း ၀င်ဆဲချင်ရင် အဲဒါလေးတွေ စဉ်းစားဘို့သင့်တယ်။
ပြီးတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို မေးလိုတယ်။
မဟန ဆိုတာသာမရှိရင် အခု မြန်မာပြည်ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆ ဂိုဏ်းဂဏ တွေ ဘာဖြစ်ကုန်လောက်ပြီထင်လဲ။
အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုးစကားကို သံယောင်လိုက်ကြစေချင်ပါတယ်။
အခုကွန်မင့်ဟာ မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သက်သက်ကိုသာ ရည်ညွှန်းပါတယ်။
မိုးပြာအဖွဲ့သားများနဲ့ အငြင်းအခုန်ပြုရန် မရည်ရွယ်ပါ။
“နေ၀င်းကလုပ်ခိုင်းလို့ စိန်လွင်က လုပ်ထားတဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့” ဆိုတာ တကယ်မို့ နောက်လူတွေ တကယ်ထင်ကုန်တာဘာဆန်းလဲ ပါလေရာရဲ့၊
စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေသာ ထွန်းကားနေပါစေ၊ ဂိုဏ်းကွဲစရာအကြောင်းမရှိပါ။ ဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာ ဘယ်မှာဂိုဏ်းတွေကွဲနေလို့လဲ၊ နောက်ပိုင်း တရားတု (ပရမတ်)တွေ ၀င်ရောလားလို့ အယူအဆတွေကွဲကုန်တာ သမိုင်းလေ့လာရင် အသိသာကြီးပါဗျာ။
ဒီပရမတ်တရားတွေကို ဗုဒ္ဓတရားတွေလို့ပဲ ယူနေဦးမယ်ဆိုရင် မဟန ရှိလည်း ဂိုဏ်းကွဲမှာပဲ၊ မရှိလည်းဂိုဏ်ကွဲမှာပဲ၊ အဓိကက တရားလွဲတွေကြောင့်လို့ မြင်စမ်းပါ ပါလေရာ။
တရားတွေဘာ့ကြောင့်လွဲနေရလဲ သိလိုလျှင် http://www.4shared.com/office/LawHsnef/ariya_ruler.html?cau2=403tNull အရိယသစ္စာ ဓမ္မပေတံစာအုပ် ဖတ်ကြည့်ဗျာ။
နှစ်တွေကြာလာလို့ အယူအဆတွေကွဲတာကိုတော့ မဝေဖန်လိုပါဘူး။ ဒါက နှစ်ကြာလာရင် ဖြစ်တတ်တာပဲ၊
ကိုယ့်တရားမှအမှန် ကိုယ်နဲ့မတူရင်အမှားတွေပဲ၊ ရန်သူတွေပဲဆိုတဲ့ သဘောထားသေးမှုတွေကိုသာ မဟနတွေ ပြင်ရမှာ။
ခေတ်ကာလအားလျော်စွာ သံဃာအဖွဲ့အစည်းကတော့ ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးနေ၀င်း၊ ဦးစိန်လွင်တို့ဖွဲ့ပေးခဲ့တဲ့ မဟန အာဏာရှင်ပုံစံအဖွဲ့မျိုးတော့ မဖြစ်သင့်တော့ဘူးပေါ့။
ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ အယူဝါဒကွဲပြားနေတာတွေ မခွဲခြားတော့ပဲ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ ဖွဲ့စည်းတဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့တစ်ခုကတော့ လိုအပ်တာပေါ့။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင် မဟနဆရာတော်တွေ ဦးနေ၀င်း၊ ဦးစိန်လွင်တို့ထက်ဆိုးတဲ့အဖြစ်ရောက်ကုန်ရင် မကောင်းဘူးပေါ့။
“အာဏာရှင် ဘာသာရေး မဟနအဖွဲ့ကို လူတွေကမုန်းလာကြရင် အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ မိုးပြာဆရာတော်ကို လူတွေအလိုအလျှောက် (ဂရုဏာနဲ့) စိတ်ဝင်စားသွားမှာပါ။”ဆိုတာ အဖိနှိပ်ခံနေရရင် မိုးပြာမှမဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေ ဂရုဏာဖြစ်သွားမှာပဲ၊
ကိုယ့်လူ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တတ်ရင် သိမှာပါ။
မမှားသောရှေ့နေ၊ မသေသော ဆေးသမားမရှိသလိုပဲ အဲဒီအဖွဲ့ထဲ ၀င်ပြီး ၀န်ဆောင်နေတဲ့ အထင်ကရ ဆရာတော်ကြီးများလည်း ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပညာရှိပီသစွာပြန်စမ်းစစ်ဖို့လိုပေပြီ။ အခုလည်း ရွှေည၀ါဆရာတော်ဦးပညာသီဟအပေါ် အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ပြုမူနေတာကို မလျော့ပေဘူး။ ပညာရှိတွေဆိုရင် သိနိုင်ပါတယ်လို့ ၀င်ဂွကျလိုက်ပါတယ် ပါလေရာရယ်။
(ဘာဂိုဏ်ဂဏကိုမှ စိတ်မ၀င်စား၊ အမြင်မတော်တွေတွေ့ရင် ၀င်ဂွကျတတ်တာ ၀ါသနာပါ။ )
လင့်ခ်နဲ့ စာအုပ်တချို့ .. သိသူများ.. ညွှန်းပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား..။
ကျုပ်ပါစင်နယ်အမြင်အရကတော့…. မဟနဖြစ်တည်နေမှုကို. ထောက်ခံပြီး.. Reform ပြန်လုပ်စေချင်တာပါ..။ ပိုပြီး စံနစ်ကျခေတ်မှီလို့.. အာဏာပိုင်တွေလွှမ်းမိုးမှုလွတ်တဲ့ ပုံစံပေါ့..။ ပိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့.. အလှူငွေနဲ့ရပ်တည်တဲ့ ပုံစံထက်.. စီးပွားရေးတခုခုနဲ့ရပ်တည်တဲ့ ပုံစံဝင်စေချင်ပါတယ်..။ မြန်မာပြည်တွင်းထက်.. ကမ္ဘာ့တန်းအဆင့်သာသနာပြု ပုံစံပိုဝင်သွားစေချင်ပါတယ်..။
we ren thu အောက်မှာ ရေးနေသလို.. သဘောတရားရေး စွတ်စွဲတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်..။ ဝေဖန်လို့ရတယ်..။ ဒါပေမဲ့.. တဖက်သားပြန်ချေပပြောဆိုခွင့်ပေးရမယ်ဖြစ်ပြီး..
..အခုလို ပြန်လှန်ချေပပြောခွင့်တွေပိတ်ပင်ပြီး (အခြေခံဥပဒေပြဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရမဲ့).. အစိုးရကကြားထဲက၀င်ပြီး.. ဖမ်းထောင်ချထားတာက မတရားပါ..။ လူသားမပီသပါ.။
..လွတ်လပ်စွာယုံကြည်မှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်း.. ထောင်ချထားတာကို အဓိကထားပြောရတာပါ..။ မတရားတာကို.. မတရားဘူးလို့ ပြောနေတာပါနော….။
“.လွတ်လပ်စွာယုံကြည်မှုနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်း.. ထောင်ချထားတာကို အဓိကထားပြောရတာပါ..။ မတရားတာကို.. မတရားဘူးလို့ ပြောနေတာပါနော….။”
လောလောဆယ်တော့ သူကြီးပြောသလိုပဲထားပါတော့ ။ နဲနဲပြန်မွှေပြီးမှ စကားပြင်မယ်။
အဲဒီမတရားမှု့က ဦးနေ၀င်းလက်ထက်ကစတဲ့ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် ရဲ့မတရားမှု့ပါ။
အဲဒါက အဲဒီတုန်းက မဟန (၃၃ပါး) ရဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
မဟန ရဲ့အလုပ်က မြန်မာပြည် ထေရ၀ါဒသံဃာဂိုဏ်းကြီး ကိုးဂိုဏ်းက အညီအညွတ်လက်ခံထားတဲ့
ဆဌသင်္ဂါယနာမူ ကို လက်ကိုင်ထား စံအဖြစ်ထားပြီး
ထေရ၀ါဒအတွက် ဓမ္မ/ အဓမ္မ ခွဲခြား ဆုံးဖြတ်ရုံပါပဲ။
အဓိကမှားတာက မဟန က အစိုးရရဲ့ အထောက်ပံ့ခံ ၊ အစီမံခံ တဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်ပါ။
ဒါကြောင့်လဲ သမိုင်းအဆက်ဆက် လက်ညှိုးထိုး ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ခံရတဲ့ ဓါးစာခံအဖွဲ့ ဖြစ်ရတာ အခုအထိပါပဲ။
ဒါပေမယ့် မဟန ကြောင့် ကောင်းသွားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါ့ထက်အရေးကြီးတာက မဟနကို အစားထိုးနိုင်တဲ့ သံဃာ့အဖွဲ့ကြီးတခုမရှိလာခင် မဟန ဆက်ရှိနေဘို့တော့လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဗွက်ပေါက်သွားမှာ။ မဟနဟာ မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒကို ဆွဲစည်းထားတဲ့ လျော့ရဲရဲကြိုးတချောင်းလို့ ကျွန်တော်မြင်ကြည့်ပါတယ်။
မဟနက ရဲရဲတင်းတင်း အစိုးရလောင်းရိပ်အောက်က ရုန်းထွက်ဘို့က ပိုလက်တွေ့ကျပါတယ်။ အချိန်မီမရုန်းထွက်ရင် သမိုင်းဆိုးပါတော့မယ်။
အခု ဒယ်အိုးဆရာတော်နဲ့ ရွှေည၀ါ ဆရာတော် ကိစ္စ နှစ်ခုမှာတင် တော်တော်ကြီး အကြည်ညိုပျက်သွားကြပါပြီ။
တကယ်တော့ ဒါတွေက အခုမှ ပြောလို့ပဲ။
အရင်ကတည်းက အစိုးရရဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှု့ကို နဲနဲပါးပါး ဝေဖန်မိတဲ့ ဓမ္မကထိကအကျော် ဆရာတော်ကြီးတွေကို ပိတ်လိုက် တားလိုက် လုပ်နေတာ ခဏခဏပါ။
ဥပမာတခုက ပျံလွန်တော်မူပြီးတဲ့ ဖြူးဆရာတော် ဦးနရပတိ တို့ လိုပေါ့။
နောက်တခုက မဟန ဘုန်းကြီးအားလုံးကို တညီတညွတ် တသဘောထဲ လို့ ထင်ကြရင်မှားပါမယ်။
အင်း… ပြောရင်လဲ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။
ဓမ္မတာသဘောအရ ပြောရရင်လဲ ဘုရားသာသနာတို့မည်သည် ဘုရားရှင်တွေ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတဲ့နောက် အကြာကြီး တည်နေတဲ့သဘောတော့ မရှိပါဘူးလေ။
ဘုန်းကြီးကိစ္စ ဘုန်းကြီးတွေလုပ်တာပဲကောင်းပါတယ်၊ တကယ်တရားစစ်တရာမှန်သိချင်တယ်ဆိုရင်
ဓမ္မနဲ့အဓမ္မကွဲပြားအောင်လေ့လာသင့်ပါတယ်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားပါတယ်၊ တဆင့်စကားကြားရုံနဲ့လည်းမယုံဖို့ရာဟောကြားထားပါတယ်…။
ဘာသာေ၇း ယုံကြည်ချက်ဆိုတာ ဘယ်လို ယုံကြည်ချက်လဲ အ၇င် ကြည့်ဖို့ လိုတယ်လေ =—
ဒါလေးအ၇င် ကြည့်ပြီးမှ လူစိတ်၇ှိသေးတယ်ဆို၇င်လည်း ပြန်စဉ်းစားကြဖို့ ပေါ့ ——ကိုယ်ပြောတတ်တဲ့ဘက်က ပဲ ဖင်ပိတ်ပြီး ပြောနေလို့ မ၇ဘူးလေ–
ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါလုပ်မိရင် ထပ်ထပ်လုပ်ချင်တယ်။ ဒီကံကြီးက ကိုယ့်ကို ရစ်ပတ်နေပြီ။ ဒီလူမလွတ်လပ်တော့ဘူး။
ဒီလောက်တန်ဖိုးများ ဒါနကြီးအတွက် ဘုရားဟောတဲ့ တစ်ဂါထာတည်းမှာ နတ်ပြည်လည်း မပါဘူး။ လူ့ ပြည်လည်း မပါဘူး။ ငရဲလည်း မပါဘူး။ နောင်ဘ၀လည်း မပါဘူး။ ဒါနအကျိုးကို ဘုရားက နတ်ပြည်လို့ မဟောဘူး။
ဘုရားက လူကိုသတ်မှ ပါဏာတိပါတလို့ ဟောတယ်။ တိရစ္ဆာန်သတ်ရင် ကံမထိုက်ပါဘူး။ အစိုးရပစ္စည်းဟာ လူ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကို ခိုးလို့ ကံမထိုက်ဘူး။ ကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုဟာ ကိုယ့်ကာမပိုင်မဟုတ်သူကို မေထုန်ပြုမှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀မဟုတ်တဲ့အရာတွေကို မမှန်တာပြောလည်း လိမ်ရာမကျဘူး။ မုသာဝါဒမဖြစ်ဘူး။ လိမ်ကောင်းတယ်။ မူးအောင်မသောက်ရင် အရက်သောက်တာက မိတ်ဆွေပေါလို့ စီးပွားဖြစ်တော့ အကျိုးတောင် ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလိုသောက်တာကို ဘုရားက သုရာမေရယလို့ ဟောတာမဟုတ်ဘူး။
ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်ပွဲဟာ ဦးနုနဲ့ ဖဆပလအဖွဲ့တို့၊ ဦးဝိစိတ္တတို့၊ မဟာစည်တို့၊ ညောင်ရမ်းတို့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေရတာကလွဲလို့ တခြားအကျိုးကတော့ မပြောလောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။
အရဟံဆိုပါတော့။ အေး သည်စာတွေက သိပ်မြင့်တယ်။ တို့လူတွေနဲ့ မတန်ဘူး။ မတန်မရာတွေကို တို့လူတွေက ရွတ်ဆိုနေမိကြတာပဲ။ သည်စာတွေဟာ စိတ္တဇအပြစ်ဖြစ်တယ်။ ဘုရားကို အထင်ရောက်သွားတော့ စိတ္တဇအပြစ်ဖြစ်စေတယ်။ အပြစ်ကကြီးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဖြစ်တယ်။
တရားဓမ္မဆွေးနွေးတဲ့အခါ ပရမတ်တွေအကြောင်း မပြောစေချင်ပါဘူး။ ပရမတ်တွေဟာ တရားမဟုတ်လို့ပါပဲ။
သည်လိုဆိုရင် သည်စာသင်တိုက်ကြီးတွေက တလွဲဖြစ်ထွန်းနေတာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မအရ လိုလားစရာမဟုတ်ဘူး။
လူသားလျှောက်ရမည့်လမ်းဟူသည် ဘုရားသခင်၏ အစေအပါးအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမဟုတ်။ မိမိကိုယ်ကို မိမိကပင် ဘုရားသခင်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လေးသင်္ချေ၊ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးမှ ပေါ်ထွန်းလာသော ဗုဒ္ဓသည် မှားယွင်းသောကြောင့် မိစ္ဆာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀တစ်ခုတည်း၌ ဉာဏ်ဖြင့် ဖောက်ထွင်းသိမြင်သော ဗုဒ္ဓသာလျှင် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။ ဘ၀သံသရာဟူသည်မရှိ။ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀တစ်ခုသာ ရှိသည်။
ဂေါတမဘုရားရှင်သည် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးခြင်း၊ ရေဘုဉ်းပေးခြင်းကြောင့် ကိလေသာမကုန်သေး။ လောဘ။ တဏှာ၊ ကိလေသာရှိသေးသည်။
ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်၏ သမီး နတ်သမီးသုံးယောက်နှင့် ပျော်ပါးစံစားရန် စိတ်ကူးမိကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် ကိလေသာ မကုန်သေးဟု ဆိုရမည်။
ပါဏာတိပါတသိက္ခာပုဒ်အရ လူ့အသက်သတ်မှ အပြစ်ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်များအသက်ကိုသတ်လျှင် ငရဲမကြီးချေ။ အကြောင်းမူ ဗုဒ္ဓသည် အသားစားခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် သတ္တ၀ါ၏ အသက်သတ်ခြင်းကိုလည်း ခွင့်ပြုရာ ရောက်သည်။
ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးတည်းပိုင် ပစ္စည်းကို ခိုးယူလုယက်ခြင်းသည် အပြစ်ရှိသည်။ အများပိုင်ပစ္စည်းကို ခိုးယူလျှင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူများမှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိသောကြောင့် အပြစ်မရှိ။
ကာမပိုင်အမျိုးသမီးကို သဘောတူပျော်ပါးရာ၌ အပြစ်မရှိ။ ဆန္ဒကို ဖြည့်စွမ်းပေးသောကြောင့် ကုသိုလ်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကဲ ဘယ်လို လဲ ဘယ်န်ိုင်ငံဘယ်ဘာသာမှ ဒီလောက် ဆိုးဝါးယုတ်မာကောက်ကျစ်တဲ့ ၀ါဒမျိုး မရှိဘူး — ခ၇စ်တို့အလာတို့ တောင် အသက်သတ်တာတွေ –ပစ္စည်းကို ခိုးယူတာတွေ ကိုေ၇ှာင် ခိုင်းသေးတာပဲ ဒီဘဲက ပေါ်တင်ကြီး လာကျဲံနေလို့ တော့ ဘယ်၇မလဲ
နောက် ဒီလောက် ဒီမိုကေ၇စီ ပါးစပ်က ထွက် နေတာ ဒီမိ်ုကေ၇စီ၇ှိတယ်ဆို တဲ့ USမှာ သွားပြီး
ထာ၀၇မကောင်းကြောင်း သွားအော်ကြည့်ပါလား –တစ်နိုင်ငံလုံးက (–) ဆော်ပေးလိမ့် မယ်
(တကယ်တမ်းက ပေါ်တင်ေ၇းချင်တာပါ ဒါပေမဲ့ မဟာ သူတော်ကောင်းတွေ ဖတ်မှာဆို တော့ တော်ကြာ မိုးပြာက ကောင်တွေ ၇ှက်ကုန်မှာစိုးလို့ —ဆဲတာမပါဘူးနော် –လိုက်၇ှာကြည့်ကြဦး)
ဂျိန်းအယူလွှမ်းနေတဲ့ ရိုးရာထေရ၀ါဒအသိအမြင်နဲ့ကတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိယသစ္စာနဲ့ အဝေးကြီးပဲဖြစ်နေမှာပဲ။
တရားဂုဏ်တော် ၆-ချက်နဲ့ မညီတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ငရဲခန်း၊ နတ်ခန်းတွေဟာ ဗုဒ္ဓပဲဟောခဲ့သယောင်ယောင်နဲ့ သီဟိုဠ်ကျွန်းက စိတ်ကူးယဉ် စာရေးဆရာဘုန်ကြီးတွေ လက်ဆော့ခဲ့တာပါ။ သမိုင်းပြန်ကြည့်ရင် အသေအချာကို သိနိုင်ပါတယ်။
ဂျိန်းအယူလွှမ်းနေတဲ့ ရိုးရာထေရ၀ါဒအသိအမြင် သီလသဘောနဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိယသစ္စာ (လူဆောင်ထိုက်တဲ့)သီလ ကွဲပြားကြောင်းကို သိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် we ren thu အနေနဲ့ ဂျိန်းအယူလွှမ်းနေတဲ့ ရိုးရာထေရ၀ါဒအသိအမြင်နဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိယသစ္စာတော်ကို ပြန်လည်ဖွင့်ဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရိဆရာတော်ရဲ့တရားတွေကို အပေါ်ယံသုံးသပ်မှုလောက်နဲ့ဆိုရင် we ren thu အတွက် အရမ်းကို နစ်နာစေပါတယ်။
လူအမှန်ဆောင်ထိုက်တဲ့ အရိယသစ္စာဓမ္မကို ဟောပြောခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓကိုတောင် သူ့ခေတ်က ဂျိန်းတွေ၊ တိတ္ထိတက္ကတွန်းတွေက အခု we ren thu ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ကို အပေါ်ယံအသိနဲ့ ဝေဖန်ပြစ်မှားသလို ပြစ်မှားခဲ့ကြတာဟာ အလွန်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ အရိယူပ၀ါဒကံဆိုတာ အရိယာကိုနားမလည်တာ၊ အရိယာရဲ့တန်ဘိုးအမှန်ကို မသိပဲ အရိယာပြောသမျှ ဘာပြောပြော အပြစ်မြင်ကန့်လန့်တိုက်နေတော့ ဘယ်မှာလာပြီး အရိယာသစ္စာတရားကို သိနိုင်တော့မှာလဲ၊ အဲဒါကိုက မဂ်တား၊ ဖိုလ်တားဖြစ်နေတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် အရိယူပ၀ါဒကံသင့်နေတဲ့ဘ၀က လွတ်ဖို့အတွက် စေတနာကောင်းနဲ့ လမ်းညွှန်ချင်တာက ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်အကြောင်းမှန်ကို မလိုတမာသူတွေ မဟုတ်က အပုတ်ချတဲ့စကားတွေနဲ့ နားယောင်နေတာမဟုတ်ပဲ၊ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်နဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် ဟောကြာခဲ့တဲ့ အရိယသစ္စာကို အသေးစိပ် (အပြစ်ရှာ၊ မကောင်းပြော၊ ကန့်လန့်တိုက် စိတ်ထားမဟုတ်ပဲနဲ့) ဆိုလိုရင်ကျကျ သိအောင် http://www.ariyathitsa.org/ မှာ သေသေချာချာ လေ့လာမယ်ဆိုရင် အရိယူပ၀ါဒကံမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အရိယာရဲ့တန်ဘိုးအမှန်ကို မသိပဲ အရိယာပြောသမျှ ဘာပြောပြော အပြစ်မြင်ကန့်လန့်တိုက်နေတော့ ဘယ်မှာလာပြီး အရိယာသစ္စာတရားကို သိနိုင်တော့မှာလဲ၊ အဲဒါကိုက မဂ်တား၊ ဖိုလ်တားဖြစ်နေတာပါ။——–ဟုတ်တာပေါ့ မိုးပြာဘာသာဝင်တွေက အ၇ိယာ ၇ူး ၇ူးနေမှတော့ မိုးပြာပြောတဲ့ အ၇ိယာနဲ့ဘု၇ားပြောတဲ့အ၇ိယာ လွဲပြီပေါ့
နောက် ကိုယ်ပြောတတ်တဲ့ဘက်က ပဲ ဖင်ပိတ်ပြီး ပြောနေလို့ မ၇ဘူးလေ –ဒါဆို ဘု၇ားက မိုးပြာတို့ အလိုအ၇ တိ၇စ္ဆာန်ကို သတ်ကြ- –သူများမိန်းမလည်း ကြောင်တောင်နှိုက်ကြလို့ 
ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့ — — တခြားပြောပြချက်တွေကို ဘာမှပြန်မဖြေ၇ှင်းပဲ
ကိုယ်ပြောဟောင်ချင်၇ာ စွတ်ဟောင်တာကြီးက တဖက်သတ်ကျလွန်းပါတယ်
နောက် မိုးပြာကို အဲ့ဒီလိုပြောလို့ —-အရိယူပ၀ါဒကံ–(အဲ သူတို့ လည်း သီဟိုဌ်ခေတ်က ဘုန်းကြီး တွေ လက်ဆော့ ထားတဲ့ စာအုပ်တွေထဲကပဲ ပြန်ပြောနေပါလားဟ)–ထိုက်မယ်ဆို၇င်လည်း ၇ဲ၇ဲကြီး အထိုက်ခံပါတယ် ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အ၇ိယာကြောင်ကြောင်ပြီး ယောင်နေကြတဲ့ –အုပ်-စု-ထဲမှာ we ren thu မပါလို့ ပဲ–ok?–အဲ့ဒီကံထိုက်လည်း ဘာကြောက်စ၇ာလည်းဗျာ –ခဗျားတို့ အယူအ၇ နောက်ဘ၀မှ မ၇ှိတာ–ဘာင၇ဲမှ ကြောက်စ၇ာမလိုဘူး -ဟုတ်ဘူးလား–င၇ဲတောင်မကြောက်တာဗျာ—လူ့ ဘ၀မှာ မိုးပြာတို့ ၇ဲ့ အ၇ိယာမဖြစ်လဲ ဘာအေ၇းလဲ—-
အဲဒါကို မှ ဘု၇ားခေါ်တဲ့ သူတွေကလည်းးအော်————ဟအော်ဟအော်ဟအော်=====
ထပ်ဆင့်ပြီး အကြံပေးလိုတာက ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်အပေါ် we ren thu ထင်မြင်စွပ်စွဲချက်များဟာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင်….. schizophrenia ဝေဒနာစုထဲက paranoid schizophrenia စိတ်ဝေဒနာကို ခံစားနေရသူဟာ အထက်ပါ Comment အရကြည့်မယ်ဆိုရင် We Ren Thu ဆိုသူထံမှ အဲ့ဒီရောဂါ လက္ခဏာဖြစ်နေပြီနဲ့တူပါတယ်။ ကြည့်ပါဦး…… “အော်————ဟအော်ဟအော်ဟအော်=====” နဲ့
ဘာတွေပြောသွားမှန်းလဲ မသိပါဘူး။ ပျက်ချော်ချော်လုပ်သလိုလို… လှောင်တာလိုလို…. ဒါမှမဟုတ် သူဖြစ်နေတဲ့ ရောဂါအရ တစ်ချက်တစ်ချက် ထဖောက်တာလားမသိဘူးပါဘူး….. ဆေးခန်းလေးဘာလေးလဲ သွားပြပါဦး… ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း… သောက်သင့်တဲ့ဆေးလေးဘာလေးလဲ သောက်ပေါ့..
ဒါမှမဟုတ် နောက်ပြောင်တာဆိုရင်လည်း….. လူကြီးတွေစကားကောင်းပြောနေတုန်း ပဲကြီးလှော်ဝင်ဝင် မနှိုက်သင့်ဘူး ကလေးရဲ့ မင်းသိရဲ့လား……
နောက်ပြောင်တာဆိုရင်လည်း….. လူကြီးတွေစကားကောင်းပြောနေတုန်း ပဲကြီးလှော်ဝင်ဝင် မနှိုက်သင့်ဘူး ကလေးရဲ့ မင်းသိရဲ့လား…တဲ့…–ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးဘိုးေ၇ —-ဘိုးဘိုးတို့ ပဲ မ၇ှိတဲ့ သွားနဲ့ပဲလှော်ဝါးကြပေါ့ —-နောက် အဲ့ဒီ ကြာ-ပေါ-ကြီး-ကြောင်(ကြာလေပေါလေ ကြီးလေ ကြောင်လေ)ဘ၀မှာပဲ မိုးပြာမိုးပြာနဲ့ အော်ပြီး အ၇ိုးထုတ်ကြတော့နော်–ကြည့်၇တာ သူလည်း အဲ့ဒီေ၇ာဂါ၇ှင်ပဲထင်တယ်–သူ့ ကလေး သေသွားလို့ gazette မှာ လာဝင်သောင်းကျန်း နေလားမသိ—–(မိုးပြာ S.၇ူးများနှင့် နောက်ထပ်ဆွေးနွေး၇န် မ၇ှိတော့ပါ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထို သကောင့်သားတို့သည် –ကိုယ်နိုင်သည့်ဘက်ကပဲ ဖင်ပိတ်ငြင်းတတ်ကြပြီး လူ့ အခွင့်အေ၇း လွတါလပ်စွာယုံကြည်ပိုင်ခွင့် အစ၇ှိသော စကားလုံးများကိုေ၇ပက်မ၀င်အောင် ပြောဆိုပြီးသကာလ–အလွန်အောက်တန်းကျသော အယူဝါဒများကို ဘု၇ားဟောယောင်ယောင် အော်ကြေသည်မှာ ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်ဟူသော အဆိုအတိုင်းပင်ဖြစ်နေပါသည် –သူတို့ ၏ အခြေခံ ငါးပါးသီလကိုပင် ပြန်လည် မခြေပနိုင်ပဲ———–
–ဟူသော အလွန်၇ယ်စ၇ာကောင်းသည့် ကလေးကုလားဆန်ဆန် စကားနိုင်လုနေခြင်းမျှသာဖြစ်နေသောကြောင့်ပင် —
အဲ့ဒီလောက် စကားနိုင်လုချင်နေ၇င်လည်း အိမ်က dog ကုိ လွတ်လိုက်ပါမည်–we ren thu ၇ဲ့ dog နဲ့မိုးပြာက သကောင့် တွေနဲ့ ပြောဖို့ ပါ (သူတို့ က dog language ကို ကျူ၇ှင်ယူပြီးသား သူတွေ –ကိုယ်ဟောင်ချင်၇ာ စွတ်ဟောင် နေတာကို ပဲ အဟုတ်မှတ်နေတာကိုး) အထူးသတိပေးခြင်း– နောက် မိုးပြာဘက်ကနေ ၀င်ပြောတော့မယ်ဆို၇င် we ren thu ထောက်ပြထားတဲ့ မင်းတို့ ၇ဲ့ ၅ ပါးသီလ အချက်တွေကို အ၇င် ၇ှင်း–ပြီးမှ လူစကားလာပြောကြ—ok? (အဲ့ဒီ၅ ပါးသီလတွေ ကို မင်းတို့ ဆ၇ာဘု၇ား -အ၇ိယာ သူတော်စွာကြီး ဥာဏ က မပြောခဲ့ဘူး we ren thu က ညာပြီးေ၇းထားတာဆို၇င်လည်း ဖင်ပိတ်ပြီး — ပြန်ပြောကြဦး)
(ဒီနှစ် မဆဲ၇ဘူးဆိုလို့ ဒီ comment မှာ ဆဲတာတစ်လုံးမှ မပါပဲေ၇းထားပါတယ် –သေချာဖတ်ကြည့်ကြ –နော်—)
မဟန ၏ မမျှတမှု က သတ်သတ်
ဦးဥာဏ၏ ထေရ၀ါဒ အယူအဆ များကို မှားယွင်းနေယောင် ၊
ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ စသည်ဖြင့်
ရှိသလို ၊ မရှိသလို၊
ယုံသလို ၊ မယုံသလို၊
ဟုတ်သလို ၊ မဟုတ်သလို၊
ထင်ယောင်ထင်မှား ကလိမ်ကျခြင်းက သတ်သတ်
ကန့်လန့် တိုက်နေလို့ မရပါ။
ဥကို မပစ်ခါနဲ့လေ၊ သီယိ ပြန်ဂျီကြီးရဲ့၊
ဘေးလူတွေကို ထိကုန်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
“windtalker ကို စေတနာနဲ့ သတိပေးလိုက်ပါရစေ၊ အပွေးမြင်ရင် အပင်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ စကား ကြားဖူးမှာပါ၊ ပြောကြဆိုကြတဲ့ စကားတွေဆိုတာ ကိုယ့်အပင်က အပွေးတွေဆိုတာကိုတော့ သတိရပါ။ လူချင်းမမြင်ရလို့ ကိုယ်ရေးချင်တာရေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ လူတွေက နားလည်သွားကြလိမ့်မယ်???”
ဘယ်က ဘဲတွေေ၇းသွားပါလိမ့်???-
ဖင်ပိတ်ငြင်းပြီး -ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ—-မင်းတို့ က မင်းတို့ ပြောတဲ့ အဆင့်ထဲကိုေ၇ာက်မှန်းမသ်ိေ၇ာက်သွားပါပကော???
“ဘေးလူတွေကို ထိကုန်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။” တဲ့
(၇ိုင်းတယ်ထင်လည်းတတ်နိုင်ဘူး—မင်းတို့ က စတာနော် ဒီကိစ္စ)
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးသိစေရန် အထက်ပါပို့စ်အား 27-1-2012 ရက်နေ့က talk to DVB လွှင့်ထုတ်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လှည့်ဖြားမှု၊ ကောက်ကျစ်သူများအတွက် တူသော အကျိုးပေးများ ရှိနေတတ်ကို နားလည်လျှက်
အရိယာသစ္စာရှင်များ ဒေါသကို သိမ်းဆည်းကြပါလော့။
အရိယာသစ္စာရှင် (ဥပမာ အနာဂါမ်) များ ဒေါသမဖြစ်ကြတော့။
ဒေါသနှင့် ဟိုရေး ဒီရေး၊ ဟို ပုတ်ခတ်၊ ဒီပုတ်ခတ်မလုပ်တော့။
အရိယာသစ္စာအမည်ခံသူများကတော့ မကျေမနပ်နဲ့ ဟိုရေးဒီရေး ဟိုလူ့မကျေနပ်၊ ဒီလူ့မကျေနပ်၊ ဟိုဝါဒ ကို ပုတ်ခတ်၊ ဒီဝါဒကို ပုတ်ခတ်နှင့် ယောက်ယက်ခတ်လျှက်ရှိနေပေသည်။
ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိယသစ္စာအမှန်ကို သိအောင်ဖော်ထုတ်နေတာနှင့် မကျေနပ်ဖြင့် ဟိုရေးဒီရေးဆိုတာ တခြားစီပါ။
ဗုဒ္ဓရဲ့ အရိယသစ္စာအမှန်ကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နေတဲ့အပေါ်မှာ မကျေနပ်ဖြင့် ဟိုရေးဒီရေး လျှောက်ပြီး လိုက်ရေးနေတာ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ စဉ်းစာတတ်သူ စာဖတ်သူများသိပါသည်။
အရိယသစ္စာအမှန်ကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နေခြင်းသည် သိစေလို၍သာဖြစ်၏။ သိစေလိုလို့ ဖော်ထုတ်နေတာ ဒေါသပါနေစရာလိုရဲ့လား။
ဒေါဖြစ် ပေါက်ကွဲပြီး ပိုစ့်တိုင်းမှာလိုလို လိုက်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတာ ဘယ်သူတွေပါလဲခင်ဗျာ။
ဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် ပါဠိတော်များကို ပရမတ္တသစ္စာဖြင့်မဟုတ်ပဲ ရိုးစင်းလှသည့် အမှုသစ္စာ (အရိယသစ္စာ) အမြင်ဖြင့် ဖော်ထုတ်နေခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဟု ခေါ်ဆိုထိုက်ပါသည်။
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ဟာမှ ဘုရားဟော သူ့ဟာဘုရားဟော မဟုတ်ဘူးဟု အငြင်းပွားခြင်းသည် ဥပဒေသဘောမျိုးနှင့်ပြောရမည်ဆိုပါက တရားမမှု သဘောမျှသာဖြစ်ပေသည်။ ထေရဝါဒအယူနဲ့ ဖွင့်ဆိုပုံမတူတာနှင့်ပဲ ထေရဝါဒကို ထိခိုက်သည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခိုင်း ထောင်ချခိုင်းခြင်းမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပေ။
ဒါသည် တရားမမှုကို ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်သော အဂတိလုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်နေပေသည်။
ယခင်အစိုးရက မဟနဘုန်းကြီးများ၏ တိုက်တွန်းပြောဆိုမှုကြောင့် အခြေအနေအရ ဘုန်းကြီးဦးဥာဏကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ရသည်ဟုဆိုသော်လည်း ယခုအစိုးရသစ်သည် လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထားသော ဒီမိုကရေစီသို့ သွားနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် တရားမမှုကို တရားမမှုအတိုင်းသာ စီရင်ဖို့သင့်ပေသည်။
ပိုစ့်ရေးသားသူ mgmaung ရဲ့
(အယူဝါဒကွဲလွဲမှုအပေါ် အယူဝါဒများဟောပြော၊ ယှဉ်ပြိုင်၊ ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ဖြင့်သာ သမိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်/
တရားဓမ္မကို တရားဓမ္မများဖြင့်သာ ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်/) ဆိုသော စကားရပ်လို
ဗုဒ္ဓဘုရားဟော အငြင်းပွားမှုကို အယူဝါဒများဟောပြော၊ ယှဉ်ပြိုင်၊ ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ဖြင့်သာဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဘာသာမတူတဲ့ ခရစ်ယန်ဘာသာနဲ့တောင် ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံတွင် နှစ်ဘက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသေးတာ အခု ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားတူတဲ့သူတွေက နှစ်ဘက်ယှဉ်ပြိုင် ပြောဆို၊ ချေပခွင့် မပြုပဲ တစ်ဖက်သတ် အတင်းအဓမ္မထောင်ချခိုင်းခြင်းသည် တရားသော လုပ်ရပ်မဟုတ်ပေ။
ဗုဒ္ဓတရားအပေါ် ကိုယ့်ဖွင့်ဆိုမှုကို ကိုယ့်အမှန်ဟု ရဲရဲရင့်ရင့် ယုံကြည်ပါက မိမိတို့နှင့် ဖွင့်ဆိုပုံမတူသော တရားများကို ပိတ်ပင်နေစရာ မလိုပေ။ လေ့လာသူများက သူ့တန်ဘိုးအတိုင်း သတ်မှတ်သွား မှာဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ကိုယ့်ဖွင့်ဆိုပုံနှင့်မတူသော တရားများကို အတင်းအားဓမ္မ လိုက်လံပိတ်ဆို့နေခြင်းကိုက ကိုယ့်အစဉ်အဆက် ဖွင့်ဆိုထားသည့် တရားတွေကိုက အားနည်းနေတဲ့သဘောဖြစ်နေလို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စိတ်မချတဲ့သဘောဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
တရားကို တရားဖြင့်သာ ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း ၀င်ပါလိုက်ရပါသည်။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက အာဏာရှင်ဆန်ဆန်ကျင့်သုံးနေကြဦးမယ်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတော်နဲ့ ဘာသာနဲ့ က လမ်းစဉ်းမတုနိုင်တော့ပါ။ လမ်းစဉ်မတူရင် ဘာသာလည်း မထွန်းကားနိုင်တော့ပါကြောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးလိုလားပြီး တင်ပြလိုက်ရပါသည်။—တဲ့
မိုးပြာတွေကတော့ ဒီနိုင်ငံကလူတွေ ခိုးတတ်အောင် သူများသားမယား စော်ကားတတ်အောင် —-အဲ့ဒီလမ်းကို သွားနေတယ် –တခြားစီပဲ–
–ထို့ ကြောင့်လမ်းစဉ်မတူရင် ဘာသာလည်း မထွန်းကားနိုင်တော့ပါကြောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးလိုလားပြီး တင်ပြလိုက်ရပါသည်။-
we ren thu အနေနဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ဟောကြားထားသည့် သီလနှင့် ပတ်သက်သော တရားများကို သေသေချာချာ အောက်ပါ လင့်များတွင် လေ့လာကြည့်ပါက မိမိနာလည်မှုလွဲမှားနေသည်ကို သိရပါလိမ့်မည်။
“သီလကို ပညာနဲ့ ဆေးကြောပါ တရား” (http://www.mediafire.com/?9avbgh0dt1q9oi1#1) နှင့်
အလယ်လမ်း ငါးပါးသီလ တရား (http://www.mediafire.com/?eg7psva68b6g3z4#1) တို့ကို နာယူကြည့်ပါက ငါးပါးသီလအပေါ် နားလည်မှု မှန်ကန်လာပါလိမ့်မည်။
အရိယသစ္စာ အလယ်လမ်းငါးပါသီလမှသာ လူတို့ဖြည့်ဆည်းသင့်သော သီလဖြစ်သည့်အတွက်
မြန်မာတွေ သွားနေတဲ့လမ်းဖြစ်သော အေးချမ်း သာယာ ခေတ်မီ တိုးတက်သည့်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်မှာဖြစ်ပါသည်။
(ယနေ့ မြန်မာထေရ၀ါဒီတွေဟောကြားနေသော ဂျိန်းအယူ၊ ပရမတ္တသစ္စာဝါဒ ငါးပါးသီလသည် ဟောသူဘုန်းကြီးများကော နာသူများပါ လူကြားကောင်းအောင် ရွက်နေ၊ ပေးနေကြသော်လည်း ” ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလို မလုပ်ကြနဲ့”
ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးသာဖြစ်နေ၏။ )
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ဟာမှ ဘုရားဟော သူ့ဟာဘုရားဟော မဟုတ်ဘူးဟု အငြင်းပွားခြင်းသည် ဥပဒေသဘောမျိုးနှင့်ပြောရမည်ဆိုပါက တရားမမှု သဘောမျှသာဖြစ်ပေသည်။ ထေရဝါဒအယူနဲ့ ဖွင့်ဆိုပုံမတူတာနှင့်ပဲ ထေရဝါဒကို ထိခိုက်သည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခိုင်း ထောင်ချခိုင်းခြင်းမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပေ။—ဆို တာလေ——–ထေ၇၀ါဒနဲ့ ဖွင့်ဆိုတာ မတူလို့ဖမ်းဆီးထောင်ချတာမဟုတ်ပါဘူး ဗျာ—သူတို့ ဟာသူတို့ ပြာပြာဝါ၀ါ ကျနော်တို့ နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး –မိုးပြာတ၇ားတွေ ကိုလည်း နာကြည့်ဦး –တ၇ားတစ်ပုဒ်မှာ ထေ၇၀ါဒကို ပုတ်ခတ်တာ အနည်းဆုံး ၂ပုံ ၁ပုံတော့ပါတယ် —-နောက် —–အဲဒီ ဘဲလျှောက်ပြေနေတဲ့ ဟာတွေကို —ဖြန့် လိုက်ပါတယ်–
“ကာမပိုင်အမျိုးသမီးကို သဘောတူပျော်ပါးရာ၌ အပြစ်မရှိ။ ဆန္ဒကို ဖြည့်စွမ်းပေးသောကြောင့် ကုသိုလ်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။တဲ့–
ကျတော့အထင်နောက်ဆုံးအချက်ကြောင့်ပဲ လူတွေတော်တော် ခိုက်ကုန်တယ်နဲ့တူပါတယ်–
မဆီမဆိုင် ၀င် ment ကြမယ်ဆို၇င် ကြိုပြီိးတော့ –မိုးပြာဘဲ အကြောင်းကို လေ့လာဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်–ကိုယ့်ဟာကို ထေ၇၀ါဒမှာ၇ဟန္တာဆ်ို ပြီး ကြောင်နေလို့အဖမ်းံ၇ပြီးတဲ့နောက် –ထေ၇၀ါဒကို ဖျက်ဆီး ဖို့ အကြံနဲ့ထင်၇ာလျှောက်လုပ်နေတော့တာ—
we ren thu
ဘာဝိနည်း ဘာကျင့်ဝတ် ဘာသီလမှ မ၇ှိပဲ နေချင်သလို နေတဲ့ဘဲကိုမှ ဘု၇ားထူး နေတဲ့သူတွေကို —ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်—-ဦးဥာဏနဲ့ တကွ သူ့ လူတွေက စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါလို့ မြန်မာလို ခေါ်ကြတဲ့ schizophrenia ဝေဒနာစုထဲက paranoid schizophrenia စိတ်ဝေဒနာကို ခံစားနေရတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာကတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ထဲက ဖန်ဆင်းထားပြီး ဒါတွေကို တကယ်အဟုတ်အမှန် ဖြစ်ခဲ့လေဟန် ဖြစ်နေလေဟန်နဲ့ ပြောတတ်တယ်။ စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေ၊ ထူးဆန်း မော်ဒန်ဘာသာရေးဂိုဏ်းထောင်ပြီး နောက်လိုက်တွေကို ဂွတီးဂွကျ နေထိုင်နည်းတွေ ညွှန်ကြားတတ်တဲ့ အနောက်တိုင်း ဘိုးတော်တွေထဲမှာလဲ ဒီဝေဒနာသည်တွေ တွေ့ရတတ်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို ဂြိုဟ်မွှေသွားတဲ့ နာဇီအာဏာရှင်ကြီး အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာလဲ ဒီရောဂါမျိုး ခံစားခဲ့ရပုံ ပေါ်တယ်။
True Answer အနေနဲ့ ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ဟောကြားထားသည့် တရားများကို သေသေချာချာ အောက်ပါ လင့်များတွင် လေ့လာကြည့်ပါက မိမိနာလည်မှုလွဲမှားနေသည်ကို သိရပါလိမ့်မည်။
“သီလကို ပညာနဲ့ ဆေးကြောပါ တရား” (http://www.mediafire.com/?9avbgh0dt1q9oi1#1)
အလယ်လမ်း ငါးပါးသီလ တရား (http://www.mediafire.com/?eg7psva68b6g3z4#1) နှင့်
တို့ကို နာယူကြည့်ပါက နားလည်မှု မှန်ကန်လာပါလိမ့်မည်။
ပရမတ္တသစ္စာက ပြောနေတဲ့ ရဟန္တာဆိုတာနှင့် အရိယသစ္စာကဆိုသည့် ရဟန္တာကို ကွဲပြားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ပရမတ္တသစ္စာအတွက် ပွင့်လာသည်မဟုတ်ပါ၊
ပရမတ္တသစ္စာသည် ဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းက အိန္ဒိယမှာ ဂျိန်းနိဂဏ္ဍတို့၊ ဗြဟ္မဏဘာသာဝင်တို့ ကျင့်သုံးသောတရားများဖြစ်ပါသည်။
လူ့အမှု ကံ (သင်္ခါရ)ငြိမ်းစေသည့် အရိယသစ္စာတရားတော်ကတော့ ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားဟောမှသာ လူသားတွေသိရှိခွင့်ရကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အကျယ်သလိုပါက ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် ရေးသားသည့် “ဓမ္မ” e-book ကို (http://sites.google.com/site/sayamvasi/003-Dhamma.PDF?attredirects=0) download ယူ၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အခြားသူကို ကိလေသာ မကုန်သေးဘူး၊ ငါးပါးသီလ မလုံးဘူးလို့ ပြောမနေကြပါနဲ့တော့ဗျာ၊ အဲဒီလို ပြောနေ၊ ရေးနေတဲ့အချိန်မှာ ရေးနေ ပြောနေကြသူတွေမှာရော ကိလေသာကုန်ပြီး၊ ငါးပါးသီလ လုံကြပါရဲ့လား။ ပြန်စစ်သင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဦးဥာဏ လုပ်ရပ်တွေကို အပြစ်လို့မြင်ရင် သူ့လိုကိုယ်မှာ မဖြစ်အောင်နေထိုင် ကျင့်သုံးကြပါ။
ရှင်းရှင်းလေးရယ် …. တရားဆိုတာ ကိုယ်အတွက်အရင် ကျင့်ကြံရတယ်။ပြီးမှ ကျန်တာဆက်လုပ်…..အခုလည်းဒီလိုဘဲ….တရားစစ်တရားမှန်ရထားပြီးရင် ထောင်ထဲကျင့်ကျင့် တောထဲကျင့်ကျင့် ဘာမှမထိခိုက်ဘူး။ဘုန်းကြီးသူ့အလုပ် သူအရင်လုပ်ပါစေ။ရှေးက ဆရာတော်ကြီးများ သူတို့အသက်မကုန်ခင် ဘာမှမရမှာဆိုးလို့ စကားတောင်အပြောမခံဘူး အချိန်လုနေရတာ။ကိုယ်လည်းဘဲ ယုံကြည်တာကို ရအောင်အရင်လုပ် သိပ်စကားများကြနဲ့။အချိန်တွေသိပ်ပိုနေရင်၊တရားထူးတရားမြတ်တွေ ပေါက်မြောက်နေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး………….
မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ အလိုအရ ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။
မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ တို့ကို စွန့်ပြီးဖြစ်သည်။
သူဟောတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ ဗုဒ္ဓဆိုတာ သူ့ဟာသူ စိတ်ကူးယဉ်ပြီးသူထင်တဲ့အတိုင်း သူ့အလိုအတိုင်း သူဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းပြောထားတဲ့ သူ့စိတ်ကူးထဲက ဇတ်ကောင်သာဖြစ်သည်။
မိုးပြာတရား(အယူဝါဒ)သည်လည်း မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ၏ တရားအယူဝါဒနှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်ခြားနားပါသည်။
မိုးပြာတရား(အယူဝါဒ)ကို သူတို့အယူသီးသန့်အဖြစ် ဟောပြောခြင်းမပြုပဲ
သူများဘာသာဖြစ်သော မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ပုတ်ခတ်စော်ကားလျှက်ဝါဒဖြန့်သောကြောင့် ဘာသာရေးလူမှု့ရေး အဓိကရုဏ်းများမဖြစ်ရန် တားဆီးသည့်အနေဖြင့် မိုးပြာခေါင်းဆောင် ဦးဥာဏကို ယခင်မဆလအစိုးရလက်ထက်က တားဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အယူဝါဒမတူလို့ ဖမ်းထားတာမဟုတ်ပါ။
မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အယူဝါဒမတူသော အခြားဘာသာများ စည်းကမ်းရှိရှိဖြင့် သူတို့ဘာသာအယူဝါဒကို ဟောပြောဖြန့်ချီ သာသနာပြုခွင့် ရရှိနေပါသည်။
မိုးပြာလို သက်သက် ရန်စ ပြဿနာရှာနေတဲ့အဖွဲ့ကတော့
လွှတ်ထားရင်ရော အသားလွတ်စော်ကားခံရတဲ့ မြန်မာပြည်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် တရားတယ်လို့ပြောမှာလား……..။
True Answer ၏ ရေးသားမှုများသည် တစ်ဖက်စောင်းနင်းဖြစ်နေလို့ ၀င်ပါလိုက်ပါ၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မြန်မာပြည်ကထေရ၀ါဒတစ်ခုတည်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်။
မြန်မာပြည်ကထေရ၀ါဒနှင့် သဘောမတိုက်ဆိုင်တိုင်း တစ်ဖက်သတ် မပြောသင့်ပေ။
အယူဝါဒမတူကြလျှင်တော့ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ဝေဖန် ပုတ်ခတ်နေကြတာ သဘာဝပဲလေ။
ထေရ၀ါဒဘုန်းကြီးတွေလည်း မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတို့၊ ကျန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒကွဲတွေကို ပလ္လင်ပေါ်ကနေ ရစရာမရှိအောင်ပြောနေကြတာပါပဲ။
အယူဝါဒ နည်းနည်းကွဲတဲ့ မိုးကုတ်နဲ့ မဟာစည်တောင် သက်ဆိုင်ရာဆရာတော်ကြီးတွေကနေစပြီး တပည့် အစဉ်အဆက် ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာပဲ။
သဘောထားကြီးစွာ ဝေဖန်မှုကို ခံနိုင်င်ဖိ်ု့လိုတာပါ။
ကိုယ့်ဝေဖန်တာ မကြိုက်လျှင် သူများကိုလည်း ဆီလို အပေါက်ရှာပြီး လိုက်မဝေဖန်ပါနဲ့လို့ ၀င်ပါလိုက်ပါသည်။
ထေရ၀ါဒီအာဏာရှင်တို့သည် ၎င်းတို့၏ တရားများရဲ့မှန်ကန်မှုကို ကိုယ်တိုင် မယုံရဲသေးပါသဖြင့် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်အား မလွှတ်ပေးဖို့ အာဏာပိုင်တွေအား ကန့်ကွက်ထားနေပါတယ်။
ဆရာတော်ကို ဘယ်လိုပဲ ထောင်ချ ထောင်ချ
ဗေဒါပျံ အံကိုခဲ ပန်းပန်လျက်ပဲ။